I-5 Star Cottage enobhavu oshisayo.
🌠🌠Siyindlu encane elungiswe ngendlela emangalisayo, kusukela nje ungena emnyango ukuphumula kwakho kuzoqala. Indawo yokuhlala evulekile yesimanje enosofa abathokomele nezishisi zezinkuni, indawo yokudlela nekhishi, eya ekamelweni elithokomele elinemicamelo egcwele kanye negumbi lokugezela le-en-suite lesimanje. Engadini kukhona ne-Hot Tub yangasese ngaphansi kwe-pergola.🌠🌠
Ukhiye we-Esk wuhlelo oluvulekile lokuphila. Isiphetho sisezingeni eliphezulu futhi ikotishi ligeleza kahle kakhulu. Ngaphandle kukhona i-pergola equkethe i-Hot Tub nendawo enkulu ye-patio yokudlela ye-alfresco. Ubhavu oshisayo unamajethi angama-80 nezipikha zeBluetooth. Sonke isidingo sinakekelwe futhi izivakashi zizozizwa zisekhaya ngempela ku-Key to the Esk.
4.95 ·159 okushiwo abanye
4.95 · 159 okushiwo abanye
Umfula i-Esk ugijima ngemuva kwendawo, uhambo oluhle lungaba nomfula kanye nezindawo zasemaphandleni ezizungezile.
Lena indawo ekahle ye-honeymoon njengoba i-Blacksmiths Shop edume umhlaba wonke kanye nendawo yomshado yaseScotland e-Gretna Green iqhele ngamamayela angu-3 kuphela nokuthenga okumnandi esitolo sokudayisa i-Gretna. I-Key to the Esk itholakala emaphandleni amahle akhiwe phakathi kweLake District kanye neNorthumberland National Parks, futhi ingamakhilomitha ambalwa ukusuka eSolway Coast eDumfries naseGalloway kanye naseScottish Borders kanye naseHadrian's Wall. Bekungeke kube lula ukuhlola iScotland ne-England. Ngemuva kosuku lokuhlola indawo yasemaphandleni, yini engcono kunokubuyela endaweni yakho yokubalekela futhi uhlale ngaphansi kwe-pergola noma uphumule kubhavu oshisayo. Isitolo, indawo yokucima ukoma kanye neretshurenti engamayadi angama-50
Sihlala amahora ama-2 ukusuka lapho, kodwa sitholakala ngocingo amahora angama-24 ngosuku. Sihlale sikhona ukuze sisize izivakashi zethu uma kudingeka.